is-dilidda vanadium, VSi2 - Goodao Technology Co., Ltd.
Birta birta ah ee birta ah. Cufnaanta qaraabada waxay ahayd 4.42. Kalama milmi karo biyaha colka iyo biyaha kulul, ee ku milmi kara hydrofluoric acid, laguma milmi karo ethanol, ether iyo acid. Habka: marka loo eego ciyaarta Saamiga vanadium pentoxide iyo silicon wuxuu ka falceliyaa 1200 ℃, ama wuxuu u dhigmaa birta Vanadium waxaa lagu heli karaa falcelinta fandhaalka leh silikon heerkulka sare leh.
Caanaha kiimikada VSi2. miisaanka kelli 107.11。 Macdanta 'birta' Cufnaanta qaraabada waxay ahayd 4.42. Laguma milmi karo biyaha qabow iyo biyaha kulul, oo lagu milmi karo hydrofluoric acid, laguma milmi karo ethanol, ether iyo acid. Habka: marka loo eego ciyaarta Saamiga 'vanadium pentoxide' ee silikonreacts-ka ee 1200 ℃, ama wuxuu u dhigmi doonaa birta Vanadium waxaa lagu heli karaa falcelinta fandhaalka leh silikon heerkulka sare leh. Codsiga: waxaa loo adeegsadaa caabbinta aashitada iyo u adkaysiga dabka
Sayniska Maadiga ah.
1. Diyaarinta filimada khafiifka ah ee fiiqda ah Silicides lakab khafiif ah oo leh waxyaabo wanaagsan ayaa si toos ah loogu soo saari karaa iyada oo lagu rakibo ion bir bir ah oo leh cufnaan sare. Kordhinta cufnaanta dogobka, wajiga siladium vanadium wuxuu korayaa, warqada Rs iska caabinta xajmiga sililida khafiifka ahna way iska cadahay. Marka cufnaanta dogobku ay tahay 25 μ A / cm2, RS waxay gaaraysaa qiimaha ugu yar ee 22 ψ, taas oo muujineysa in silidar joogto ah la sameeyay. Falanqaynta kala-soocidda raajada ayaa muujisay in afar nooc oo ka mid ah silikidhada 'vanadium' oo ay ku jiraan V3Si, V5Si3, V3Si5 iyo VSi2, lagu sameeyay lakabka la beeray. Ka dib markii la nadiifiyo, RS ayaa hoos u dhacday, Rs ugu yar ayaa lagu dhimi karaa 9 ψ, adkeysiguna wuxuu noqon karaa mid ugu hooseeya illaa 72 μ ψ m, taasoo muujineysa in tayada lakabka khafiifka ah ee loo yaqaan 'vanadium silicide lakabka' la sii hagaajiyay Ka dib cirbadeynta cufnaanta sare ee qorraxda iyo annealing, wejiga siladium ee 'vanadium' ayaa sii kordhaya. Cirbadeynta cufnaanta sare ee dogob iyo kuleylka kuleylka (1200 ℃).
2. Siladium Vanadium waa nooc ka mid ah dhawaqa nuugaya qalabka dhoobada. Lakabka dusha sare ee hantida nuugista dhawaaqa ayaa lagu dahaadhay dusha sare ee lakabka salka.
Hore: Is-dilidda Manganese, MnSi
Xiga: Magnesium Silicide, Mg2Si
saafi ah vanadium warshadaha budada silicinta
saafi ah vanadium budada silicide Factory
saafiyayaal nadiif ah oo vanadium ah
Warshadaha silifa-faneedka superfine
Warshad silifa-faneed faneed aad u sarreeya
Soo saaraha silifa-faneedka superfine-ga ah
Soosaarayaasha silifa-faneedka fiiqan ee superfine
Qiimaha silifa-faneedka 'vanadium' superfine
Xigashooyinka xadiidka silifa-faneedka superfine